Geedka Loo Aqoonsaday Kan Ugu Dheer Aduunka iyo Dalkuu Kuyaal (Video+Sawirro) – Radio Daljir
Geedka Loo Aqoonsaday Kan Ugu Dheer Aduunka iyo Dalkuu Kuyaal (Video+Sawirro)
Agoosto 24, 2017 7:53 b 6
Tan iyo sanadkii 2006, geedka ogaal ahaan ugu dheer adduunka waa California redwood laguna naanayso Stratosphere Giant’, Balse cilmi-baaris iyo daba-gal dheer kaddib, Hyperion ayaa la ogaaday inuu 10ft ka dheer yahay Giant.
Taas waa natiijada usoo baxday koox uu hoggaamiyay Steve Sillett oo marar kusoo laabtay geedkan si uu u hubsado dherernimadiisa. Dadaal dheer kadib, waxay rasmi ugu dhawaaqeen inuu yahay kan ugu dheer geedweynaha adduunka.
Xasan Sheekh Maxamuud oo Shir Kaga Qaybgeli Doona Koonfur Africa (Sawirro)
Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland oo Mas’uul Cusub Magacaabay
Mukaram 3 years ago
Geed ka aduun ka ugu sheer
Geedka aduunka ugu dheer intuu kuyaalaa ?
Intuu ku yaal geedka aduunka ugu dheer
Ka jawab su asha
clrashid yasin 5 years ago
Wxn kadhiban lahaa dumarku inaysan gurigooda kasoobixin
U Jawaab Mukaram Buri halceliska